7 waxay bixisay codsiyada iPhone si ay u soo dejiso November bilaash ah 8 - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo »7 waxay siisay barnaamijyada iPhone-ka si ay u soo dejiso November bilaash ah 8 - BGR
7 waxay siisay barnaamijyada iPhone-ka si ay u soo degsadaan Noofembar 8 - BGR
Ku bilow bilowga usbuucaaga si fiican barnaamijyo badan oo iPhone ah oo lacag badan oo ku meel gaar ahna bilaash ah oo ku yaal App Store. Mar labaad, waxaan haysannaa tan oo ciyaaro aad u wanaagsan liiskan, oo ay ku jiraan kuwa aadka u qabatimay Cytus II - in qof walbaa ku daro wax ururinta - iyadoo la adeegsanayo qaar ka mid ah dalabyada wax soo saarka adag.
Qoraalkani wuxuu daboolayaa barnaamijyada loo bixiyo 'iPhone' iyo iPad-ka oo la bixiyo oo bilaash ku ah soo-saareyaashoodu oo ay bilaash ku heli karaan muddo xaddidan. BGR kuma xiriiraan wax dalabayaal ah oo soo saareyaasha ah. Ma jiro hab la yiraahdo mudada ay xor noqon doonaan. Iibkaan ayaa ku dhamaan kara saacad ama usbuuc. Sida iska cad, waxa kaliya ee aan dammaanad ka qaadi karno waa inay ahaayeen kuwa xor ah xilligii qorista maqaalkan. Haddii aad gujiso xiriiriyaha oo aad aragto sicir lagu soo bandhigay arji halkii aad ku isticmaali lahayd ereyga "hel", lacag la'aan ma aha. Iibkii wuu dhammaaday. Haddii aad kala soo baxdo barnaamijka wax uun, Apple ayaa kugu dallaci doona. Codsiyada qaarkood waxay lahaan karaan astaamo dheeri ah oo u baahan iibsiyo-app. Ku soo celi RSS feed ama u isticmaal samee farriin email ah in lala socodsiiyo sida ugu dhaqsaha badan markii daabacadahaan la soo daabaco oo aysan ku dhicin wax iib ah.
Caadi ahaan 1,99 $
"Cytus II" waa ciyaar muusig oo muusiko ah oo ay abuurtay Ciyaaraha Rayark. Kani waa cinwaankeenii afaraad ee ciyaarta laxanka, oo ah raadadka saddex guulaha adduunka, "Cytus", "DEEMO" iyo "VOEZ". Isuduwaha "Cytus" wuxuu dib u soo celinayaa shaqaalihii asalka ahaa waana mid ka dhashay shaqo adag iyo dadaal.
Mustaqbalka, aadanuhu waxay dib u qeexeen horumarka iyo isku xirnaanta internetka. Waxaan hadda si fudud ula qabsan karnaa adduunka dhabta ah adduunka internetka, annagoo badalna nolosha sidii aan ku naqaannay kumanaan sano.
Meelaha fiber cyTus mega mega firaaqada ah, waxaa jira halyeey aan qummanayn oo ah sir Sayid. Muusiggiisa ayaa leh soo jiidasho aan la xakamayn karin; Dadku waxay madaxa ugaga dhacaan cidhibta jacaylka muusikada. Sida uu sheegayo xanta, qoraal kasta iyo garaacis kasta oo muusikadiisa ah waxay ku gaari doontaa dhagaystayaasha qoto dheer ee nafsadooda
Maalin maalmaha ka mid ah, Sir, oo aan waligiis soo muuqan kahor, ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay inuu qaban doono xafladdii ugu horreysay ee mega-riwaayad -ir fane oo lagu casuumi doono fannaaniin caan ah iyo DJ caan ah sida bandhigyada. Markii iibinta tikidhada ay bilaabeen, ayaa rabshado aan hore loo arag dhicin. Qof kastaa wuxuu doonayay inuu arko wejiga dhabta ah ee .sir.
Maalinta ugu wanaagsan, malaayiin dad ah ayaa ku xirnaa dhacdada. Hal saac ka hor bilowga dhacdada, rikoodhkii adduunka ee hore ee xidhiidhada isku midka ah waa la jebiyey. Magaalada oo dhami waxay ku fadhiisatay cagihiisa iyadoo sugaysa Sir inuu samada ka soo dego ...
- Qaab aan caadi ahayn "Line xukun firfircoon" qaabka ciyaarta
Taabo qoraalka sida ugu dhakhsaha badan ee ay xukunka xukunku u garaacaan si ay u gaaraan dhibco sare. Iyada oo leh shan nooc oo qoraal oo kala duwan iyo xariiqa xukunka oo si firfircoon u habeeya xawaareheeda muddo, khibradda ciyaarta ayaa markaa lagu daraa muusikada. Ciyaartoyda si sahlan ayey iskaga dhex gelin karaan heesaha.
- Wadarta in kabadan 150 heeso tayo sare leh (50 + ciyaarta salka, 70 + sida IAP)
Ciyaarta waxaa ka mid ah heeso ay sameeyeen majaajilaystayaal ka kala socda adduunka oo dhan, Japan, Korea, USA, Europe, Taiwan iyo inbadan. Iyada oo loo adeegsado jilayaasha, ciyaartoydu waxay ku ciyaari karaan heeso noocyo kala duwan ah oo ay ka mid yihiin elektiroonig ah, dhagax weyn iyo mid heer sare ah. Waxaan kalsooni ku qabnaa in ciyaartaan ay ku noolaan doonto illaa heer sarre iyo rajooyin.
- In ka badan 300 darajo kala duwan
In ka badan 300 kala-soocidyo kala duwan ayaa loo qaabeeyey, laga bilaabo tan ugu fudud ilaa kuwa ugu adag. Waxyaalaha ciyaarta hodanka ah waxay qancin karaan ciyaartoy heerar kala duwan ah. Qaado caqabado xiiso leh oo ku raaxee dareenka fartaada.
- Baadhista adduunka ugu caansan ee internetka ee leh jilayaasha ciyaarta
Nidaamka taariikhiga ah ee gaarka ah "iM" wuxuu hagi doonaa ciyaartoyga iyo jilayaasha ciyaarta inay si tartiib ah dib ugu dhisaan sheekada iyo dunida ka dambeysa "Cytus II". Ku muuji runta sheekada iyada oo leh qibrad muuqaal leh oo muuqaal leh.
Soo dejiso Cytus II
Ku dhufo boodbood!
Caadi ahaan 0,99 $
Tijaabi falcelinta fartaada adigoo taabanaya shaashadda, adigoo tuuraya kubbadda!
Ciyaartu way fududahay in la barto oo adag in la barto
● Taabo shaashadda si aad kubbad ugu tuurto
● U deji waqti tallaalkaagu ku qaadi doono kubad kasta
Ku ciyaar xawaare aad adigu iska leedahay
Degdeg ah oo siman, oo ku habboon dhammaan noocyada munaasabadaha ah, waxaad ku ridi kartaa duulista dugsiga, musqusha, sariirtaada, shaqada, ma jirto xaddidid meesha aad ku dhici karto !
Soo deji dhicin!
U rogo sawiradaada cajiibka ah sawirada, filtarrada, wareejinta iyo muusikada hal barnaamij - Fliptastic!
• XULO: dooro illaa 100 sawirro ah Instagram, albums sawir ama qaado sawir cusub adoo isticmaalaya kamaradda
• FARIIMAHA FARSAMO: Dhig, ku dar qoraal ama ku isticmaal shaandhooyin gaar ah sawirradaada!
• MUSIC: Kudar miyuusigga asalka ah fiidiyowyadaada oo leh codka codka Fliptastic (in ka badan dhowr heesood ayaa lagu daray), ama u adeegso heeso maktabaddaada muusikada
• Waxqabadka gaarka ah: Ku dar saameynta Barafka, Wadnaha iyo Xiddigaha oo kaliya Fliptastic!
• BADBAADADA: Codso wareejinta jilicsan ee jilicsan sida Crossfade, Slide, Saber Light iyo inbadan
• SHAQO: U soo degso Instagram, Facebook, YouTube ama ku keydi aaladda kale!
• INSTAGRAM: Si fudud u garaac sumadda Instagram si ay si toos ah ugu kobciso fiidiyowga 'Instagram'!
Soo dejiso Fliptastic Pro
Shirka xusuus qorka
Caadi ahaan 0,99 €
Ku qaado daqiiqado kulankaaga ipadkaaga, si toos ah u buuxi adigoo adeegsanaya ballamaha jadwalkaaga, oo emayl ah ama ku daabac hal dhagsii barnaamijkan wax badbaadinta ah.
Waqti dheeri ah oo qoraal qoraal ah oo qoraal ah lama badinayo! Looma baahno inaad lug culus kombuyuutar culus qaadatid kulan kasta! Hadda waxaad u istcimaali kartaa ipadkaaga inaad ku qaadato qoraalada kulanka isla goobta adigoon wax diyaarin ah sameyn. Dhamaadka kulanka, hal guji, qof kastaa wuxuu si dhakhso leh uheli doonaa daqiiqadaha kulanka kulanka qaabkiisa xirfadeed.
WAXYAABAHA LAGA HELO:
- Ku qor qoraalada kulanka ipadkaaga
IPad-kaaga hadda waa aaladda ugu habboon ee shirarka - qor qoraalo ay ku jiraan cinwaanka, taariikhda, goobta iyo ajendaha kulanka. Waqti u keydso adiga oo horay uga buuxiya ballantaada ama jadwalka kulan hore. Ku dar ficillada qoraaladaada kulan, midkasta oo leh qeexitaan, milkiil, iyo taariikhda loo qabtay. Dhamaadka kulanka, emayl u qor ama u qor dhammaan kaqeyb galayaasha, oo si otomaatig ah kuu soo saaray, daqiiqado xirfad ahaan loo qaabeeyay.
- Ku dar shirarka horay loo buuxuyay si otomaatig ah jadwalkaaga
Xulo kulan kalandarkaaga kulan cusub oo si otomaatig ah looga buuxiyo dhammaan faahfaahinta laxiriirta, oo ay ku jiraan cinwaanka, taariikhda, qolka, liiska kaqeybgalayaashu, iyo ajendaha kulanka.
- Ma leedahay kulan caadi ah? Si otomaatig ah u buuxi kulamada cusub adoo nuqul ka sameynaya kulan hore
Abuur kulan cusub adoo ka duulaya qoraalada kulanka hore. Kulankan cusub ayaa si otomaatig ah looga soo dejisan doonaa shirkii hore waxaana lagu cusboonaysiin doonaa taariikhda iyo saacadda maanta.
- Ku darista ka-qaybgalayaasha buugga cinwaankaaga oo dhammaystiran
Looma baahna inaad ku qorto magaca qofkasta - oo wata buugga cinwaanka 'Auto address Book'. -dhammeystir, kaliya qor dhowr xarfood si aad u soo bandhigto liiska magacyada la soo jeediyay ee lagu daro kulamadaada hal guji.
- Gali saamiyada taariikhaha qaangaarka
Ku dar ficillada qoraaladaada kulan, midkasta oo leh sharaxaad, milkiilaha iyo taariikhda la doonayo. Eeg falalkii dambe ee lagu muujiyey ciyaarta oo hubi inay calaameeyaan inay dhammaystiran yihiin. U sameey xasuusin si aadan u seegin taariikhda lagaa doonayo.
- Emailo daqiiqad kooban loogu diyaariyey kaqeybgaleyaasha kulanka
Dhamaadka kulankaaga, dhagsii sumadda Wadaag si aad si otomaatig ah uga soo saarto daqiiqado xirfadle u qaabeysan una dir qof kasta. kaqeybgalayaasha kulanka. Ma u baahan tahay inaad soo celiso qoraallada kulanka asbuucii la soo dhaafay? Way fududahay - kaliya fur kulankan oo guji "Email" si aad dib ugu dirto.
- Si dhakhso leh u daabac daqiiqado xirfadaysan oo qaabaysan
Mararka qaar waxaad ubaahantahay nuqul warqad ah qoraaladaada kulanka - hada waad haysan kartaa waxa ugu fiican labada adduun. Ku qor qoraaladaada iPad-ka, kadib dhagsii "Daabac" si aad u soo saarto warbixinada qaab shaqadeed qaabaysan, kuna daabacan mid kasta oo daabacan AirPrint.
- Codka hadalka
Riix batoonka makarafoonka ee kumbuyutarkaaga iPad-ka si aad u dhaqaajiso ereyga codbixinta, ka dibna hadal. oo u oggolow ipadkaaga inuu gacanta kuugu dhigo qoraalka.
- U dhoofinta qoraalada kulanka Dropbox, Evernote, iBooks, AirDrop, iwm.
Dhoofinta qoraaladaada kulanka codsiyada kaydinta dukumiintiga aad ugu jeceshahay, oo ay ku jiraan Dropbox, Evernote, iBooks, Kindle, iyo inbadan. Google Drive iyo SkyDrive. U dir qoraaladaada kulan ahaan sidii PDF ah iPhones iyo iPads u dhaw adiga oo adeegsanaya AirDrop.
Soo degso Qoraalka Shirka
Caadi ahaan 0,99 $.
Mos wuxuu ku soo noqday safarkiisa ugu weyn uguna xiisaha badnaa noloshiisa! 19659006] U bood gidaarrada si aad ugu guuleysato guusha oo leh heerarka dahsoon ee 30 iyo ficil-hawleed!
Waqtigaan, Mos wuxuu bartay xoogag cusub oo cajaa'ib leh: ku laabashada xargaha, ku dabaalashada jelly, wadista jidadka, boodboodka derbiga iyo la-dagaallanka cobwebs-ka si loo gaaro dhamaadka heerka.
Kaliya kuma tihid hal-abuurnimadan cusub, waxaad samayn kartaa wakhtiga ugu dhaqsaha badan asxaabtaada, waxay u muuqdaan inay yihiin cirfiidyo dhinac socda, kuna dagaallamaya xawaare buuxa waqtiga ugu fiican.
Adiga ayaa go’aaminaya sida aad rabto inaad u ciyaarto: sida xawaaraha? Waxaad isku dayi kartaa inaad garaacdo waqtiga degdegga ah ee heerarka oo dhan. Ma waxaad door bidaa inaad soo aruuriso? Isku day inaad aruuriso dhamaan qeybaha qarsoon ee heerarka. Haddii aad khabiir tahay, waxaad raadin kartaa qalfoofka dahabka ah ee qarsoon ee heer kasta ah, habka kaliya ee lagu gaari karo waa in la maro meelaha qarsoon ee khatarta ah.
Nidaamka dharka ayaa soo noqday oo ka fiican sidii hore. Ma rabtaa inaad xirato dhar dinosaur, fedora iyo san duuf leh? Tan waa la diyaarin karaa!
Weli waxaa jira waxyaabo badan oo laga filan karo, Mos Speedrun 2 waxaa ka buuxa sir qarsoon!
Soo dejiso Mos Speedrun 2
Habeenkii dayaxu buuxsamay
ee Dayaxa oo Buuxda "waa ciyaar kaarka istaagga ah. Ma jiro tilmaamo khasab ah oo loogu talagalay dadka bilowga ah, ma jiro xiriir internet ah, kaar burush ah, ma jiro toban istaroog. Qisada ayaa lagu ciyaari doonaa dagaalka kaarka. NPC iyo BOSS kasta waxaa loo xilsaaray howl iyo dabeyl. Kala-doorbidyo kaladuwan ayaa kuu horseedi doona dhammaadyo kaladuwan.
Si loo helo ayeeyadii la waayey, Little Red Riding Hood wuxuu kali kadhigay Black Forest, halkaas oo ay wali mugdi iyo madow ahayd. Waxay wajahaysaa gool hayaha kaynta, sheeko xumada, sixirka fadhiga, tuulooyinka shisheeyaha iyo runta si tartiib tartiib ah u soo baxaya ...
Habeennada dayaxa madoobaa, ee daahyada dahsoon ee Duurka Madoow ayaa daaha ka rogi doona mid ...
* Dagaal kaararka istiraatiijiyadeed ee ku saleysan isbadalka
* Lix meelood, in ka badan 500 kaararka bilaashka ah ee isbarbar dhiga
* Sagaashan iyo sedex mucaarad oo qarsoon ayaa kaa sugaya loolankaaga
* Si aan kala sooc lahayn u kicinta dhacdooyin aan la garanayn inta lagu guda jiro kasbashada
* Dhowr ikhtiyaar xaaladeed oo saameeya sumcaddaada iyo geesinimadaada
Anaga oo dooneynna inaan noqonno qof weyn, waxaan wali xasuustaa bilowgii wadnaha, sida kan Little Red Riding Hood, geesi iyo diiran
Sida mugdiga ah sida dariiqa loo raaco, marna ha i quusan qalbigeyga si aan ugu dambeyntii u awoodo inaan sii wado iftiinka.
Habeenkii dayaxa oo buuxa, hel hooyadaa.
Nalka shumaca ee sannadaha, dhammaad wanaagsan
Kala Soco Habeenkii Dayaxa
Dugsiga Talene Kids
Caadi ahaan 4,99 $
U sheeg barnaamijka ugu wanaagsan ee carruurta waa barxadda ciyaarta carruurtaada yaryar si ay farxad ugu bartaan. Barashadu maaha kaliya kaydinta xaqiiqooyinka iyo xirfadaha. Carruurtu waxay si firfircoon u dhisaan aqoonta iyaga oo ku dhex daraya fikradaha iyo fikradaha cusub qaab-dhismeedkoodii hore. Waxaan carruurta ka dhigaa kuwa faraxsan oo kalsooni qaba. Waxaan ka taageernaa barashada meelaha jir ahaan, bulshada, shucuurta iyo horumarka aqooneed, iyo sidoo kale barashada maadooyinka kala duwan sida luqada iyo xisaabta. Talene waa goob aamin ah oo leh nashaadyo badan iyo ciyaaro waxbarasho
Hawshani gabi ahaanba waxaa loo hibeeyay ABC. Waxay u oggolaaneysaa cunuggaaga inuu arko, maqlo oo waayo-aragnimo u yeesho xarfaha.
Tani waxay siin doontaa khibrad waxbarasho oo heer sare ah maadaama ay baran doonaan sidii loo aqoonsan lahaa xarfaha iyo dhawaqa iyo sidoo kale ereyada qaarkood ee laxiriira warqaddan. Waxaan sidoo kale u oggolaanay inay ogaadaan raadinta warqad iyadoo carruurtu wax ku bartaan adeegsashada caqligooda.
Isku habboonaanta (Match Up) waa firfircooni ku habboon in laga caawiyo carruurta inay horumariyaan xirfadahooda luqadeed. Waxaan ka caawineynaa inay si buuxda u muujiyaan naftooda si ay naftooda ugu muujiyaan qoraal ahaan waxna u akhriyaan.
Afku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah hannaanka fikirka ee cunugga la kulmi doono. in lagu hadlo oo la dhageysto badanaa.
Erayada Hal-abuurka ah waa ciyaar eray loogu talagalay in lagu kobciyo ereyada carruurta. Thanks to this, waxaan siinnaa muuqaal balaaran oo luqadda ah, oo leh saxan sax ah iyo hadal.
Caruurtu si dabiici ah ayey xiiseeyaan xisaabta maaddaama ay ka jirto adduunka ku wareegsan. Ilmuhu waxay jecel yihiin inay weydiiyaan su'aalo oo ay ciyaaraan ciyaaro ku lug leh dhinacyo badan oo xisaabta ah.
Shaxankayga gabi ahaanba waa mid loogu talagalay soo gudbinta tirooyinka carruurta. Waxaan u oggolaan iyaga inay la kulmaan raadinta nambarada sida carruurtu wax u bartaan isticmaalka caqligooda
Isku-darka qaababka ayaa ah nashaad ku habboon carruurta inay bartaan magaca foomamka. Wuxuu horumariyaa isuduwidda indhaha ee indhaha iyo xirfadaha dhaqdhaqaaqa. Tani waa mid faa'iido leh maxaa yeelay waxay ka caawineysaa inay horumariyaan xirfadahooda akhriska iyo qorista mustaqbalka iyo horumarintooda luqadeed ee dheeri ah.
Aniga i xiiriira ayaa ah nashaadaad xiisa badan oo u ogolaaneysa caruurta inay bartaan astaamaha. Carruurtu waxay yeelan doonaan xallinta halxiraalayaal madadaalo ah inta ay baranayaan in la aqoonsado oo magac kasta loo magacaabo. Waxaa jira layaab qosol leh ka dib marka aad dhamayso dhammaan tillaabooyinka.
Ciyaarta, carruurtu waxay ku tababaran karaan xirfadaha nolosha. Bouncy Fun waa ciyaar fiican oo ka caawisa carruurta inay bartaan waxyaabaha ku saabsan midabada. Iyadoo tan la raacayo, waxay ku celcelin doonaan xirfadahooda, waxay helayaan aqoon waxayna baran doonaan inay ka qeyb galaan howl ayna gaaraan.
Caruurtu siyaabo badan ayey wax ku bartaan. Go Bang waa ciyaar buufin ah oo ay ka buuxdo madadaalo loogu talagalay carruurta, taas oo ka caawin doonta iyaga inay wax ka bartaan midabada. Tan, waxay awood u yeelan doonaan inay aqoonsadaan midabada oo ay bartaan inay ka qeybgalaan howlaha, ka gudbaan caqabadaha, xannibaan waxyaabaha jeedinta leh oo ay gaaraan natiijada la rabo.
Farshaxanku waa hab fiican oo lagu horumariyo hal abuurka. ee carruurta yar yar. Farshaxanka iyo abuurista cunugga ayaa ka tarjumaya waaya-aragnimadiisa.
Buuggaygu sawir wuxuu u oggolaanayaa carruurta inay ogaadaan, baaraan, tijaabiyaan oo xitaa ay abuuraan habab cusub oo wax lagu qabto. Waxaan ka caawinnaa carruurta inay horumariyaan awoodooda garashada khibradaha iyo fikradaha hab gaar ah.
Buugga Taariikhda Talene
Waqtiga sheekadu wuxuu noqon karaa waqtiga ugu jecel ee maalinta. Ilmuhu waxay jecel yihiin inay dhageystaan ​​sheekooyinka. Ka sokow noqoshada wanaagsan, waqtiga sheekada waxay siisaa carruurta farriin muhiim ah.
Xayawaanka loo yaqaan 'zoo' ee alifbeetada waa hab xiiso leh oo lagu barto magacyada xayawaannada iyo alifbeetada. Adigoo garaacaya warqad, cod dheer ayaa loogu dhawaaqi doonaa waxaana lagu tusi doonaa xayawaan ka bilaabanaya warqaddan. Gudaha beerta, laba waxqabadyo kale ayaa u oggolaanaya cunugga inuu barto dhammaan xirfadaha luqadda ee muhiimka ah.
Ku raaxaysi lambarada
Ku raaxeysiga lambarada waxaa ku jira barashada ardayda hab madadaalo ah. Waxay ka koobantahay sawiro qurux badan oo cunug kastaa jeclaan lahaa. Taabo lambar ku garaac garaac si aad u aragto lambarka oo aad u tiraahdo kor. Waxaad sidoo kale ku dhajin kartaa qariirada si aad u aragto qiimaha tiradaas gaarka ah. Ciyaarta, waxaa jira labo howlo kale.
Soo dejiso Talene Kids School
Source Source: Dukaanka App
Dukaan caanka ah ee dual-dego caanbaha adduunka ugu caansan, Anker, wuxuu ku kacayaa kaliya $ 9,79 xilligan - BGR
Doorbell 2 Video Ring, 6 $ Smart Jacks, Sony iyo Bose ANC Dhagaha-dhego-badan, oo lagu daray - BGR
VIDEO. Anny Duperey rembarre Anne Roumanoff après une question sur la chirurgie esthétique : “C
Kate montre son côté maternel alors qu'elle rencontre un enfant et sa mère à l'hospice
India: CBI waxay ku dhacday xafiisyada Amnesty International ee Bengaluru iyo Delhi | Wararka Hindiya
RTL Midi ee 15 November 2019 - VIDEO
Rashford wuxuu ka qoray riyada Man United warqad uu jecel yahay caruurnimadiisii
DADKA & LIFESTYLE7,522
TECH & TELECOM2,594
Video dheeraad ah3,447